ဤအကြောင်းအရာသည်လူမှုမီဒီယာတွင်သင်မျှဝေပုံဖြစ်သည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 14, 2013 Douglas Karr
သင်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေသည့်အခါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂဲလ် + ပေါ်တွင်သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုအများဆုံးရယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထက် ပို၍ မကြည့်ပါနှင့်။ Angie ၏စာရင်း။ (ငါတို့ကဲ့သို့) ရှေးရှေးများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုaကို အသုံးပြု၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့တွန်းပို့သည် ထုတ်ဝေ application များ၏အိမ်ရှင် ကဲ့သို့ Hootsuite သို့မဟုတ် Buffer ။
ပြနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကို Facebook နှင့် Google+ တွင်အနည်းငယ်မျှသာရောက်ရှိနိုင်သည်။ မများလွန်းသောရှယ်ယာများ၊ ဒိုင်ယာလော့ခ်သိပ်များလွန်းခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုထုတ်ဝေဖို့တတိယပါတီကိုသုံးနေတယ်။ ဒါကြောင့် Edgerank ကငါတို့မြင်သာအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ တင်ထားသောဆောင်းပါးများသည်ဤပုံစံနှင့်တူသည်။
အခုကြည့်ပါ ဦး Angie ၏စာရင်း သူတို့ဆောင်းပါးတွေဘယ်လိုထုတ်ဝေသလဲ။
၂၃ အစုရှယ်ယာ ၃၂ ခု၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာမှတ်ချက်များ ၉ ခု၊ မှန်ကန်တဲ့ရေယုံအရောင်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို! ရှေးရှေးတုန်းကကမ္ဘာကြီးစောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျှဝေခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ၄ င်းတို့အကြားခြားနားချက်မှာ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏ဆောင်းပါးသို့လင့်ခ်အတိုတစ်ခုနှင့် upload ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဂရပ်ဖစ်ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ထပ်တိုးရန်အချိန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ထောင်နှင့်ချီသောလူများကထိုဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဤဆောင်းပါးကိုမြင်တွေ့နေရသည်။
ရုပ်ပုံများကိုစီးအကျယ်အ ၀ န်းလုံးတွင်ပြသသည်။ အခြားဆောင်းပါးများနှင့်တွဲဖက်သည့်သေးငယ်သည့်သေးငယ်သည့်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းလူတန်းစားများက Facebook နှင့် Google+ တို့တွင်စီးဆင်းနေသောကြောင့်စာသားဖြင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်လာသည်။ ဆောင်းပါးတပုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုမျှသာမြင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ကြီးမားသောပုံရိပ်များကိုသူတို့၏မျက်လုံးများကမမြင်နိုင်ပါ! ဂူဂဲလ်ကသူတို့ကိုထုတ်ပြန်သည် နီးပါးအပြည့်အဝ browser ကိုအကျယ်မှာ!
Illustrator of Photoshop တွင်ဤပုံများကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်ရန် template ပုံစံတစ်ခုကိုတီထွင်ရန်သင်စဉ်းစားလိုကောင်းလိုမည်။ သူတို့တကယ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Tags: Facebook ကgoogle ပေါင်း+ googleပုံရိပ်တွေဝေစုဆောင်းပါးများကိုမျှဝေပါ
16:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 50
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်အတွက် ကောင်းမွန်သောဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြံပြုချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
18:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 59
Douglas ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုကြားတွင် ကြီးမားသောကွာခြားချက်တစ်ခုရှိပြီး Angie သည် မည်သို့အောင်မြင်မည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်နိုင်သည်။
သြဂုတ်လ7ရက် 2013 ခုနှစ် 6:25 နာရီ
ဟေး ဒေါက်ဂလပ်စ် – ဒီပို့စ်ကို သဘောကျပြီး ငါ့ရဲ့ G+ ဆောင်းပါးအတွက် ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပုံများကိုအသုံးပြုကာ အမှတ်တံဆိပ်များ၏ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်နမူနာများကို ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းကို အောင်မြင်မှုရယူရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ငါလုံးဝသဘောတူတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Buffer ကိုနှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် G+ နဲ့ Facebook မှာ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးဆုံးပို့စ်တွေအတွက် ပုံတွေကို အပ်လုဒ်လုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ယူပါတယ်။ G+ တွင် လင့်ခ်ချိတ်ထားသော သို့မဟုတ် အပ်လုဒ်လုပ်ထားသည့်ပုံကြားက ကွာခြားချက်မှာ ကြီးမားသည်မှာ သေချာပါသည်။